I-WholesaleSP-VT006 High Purity Coenzyme Q10 (Ubiquinol /Ubidecarenone) 99% CAS: 303-98-0 kunye nomzi mveliso weXabiso loKhuphiswano kunye nabavelisi |Spring-Bio
SP-VT006 High Purity Coenzyme Q10 (Ubiquinol / Ubidecarenone) 99% CAS: 303-98-0 ngexabiso loKhuphiswano
Yintoni Q10 5%;10%;Amashumi amabini%;98%
Imbonakalo: Mthubi ukuya kwikristale e-orenji yomgubo oqukuqelayo
I-Coenzyme Q10, ekwabizwa ngokuba yi-ubiquinone, ubidecarenone, i-coenzyme Q, kwaye ishunqulelwe ngamanye amaxesha ukuya kwi-CoQ10, yinto eyenzeka ngokwemvelo efumaneka kuyo yonke iseli emzimbeni.I-Coenzyme Q10, okanye i-CoQ10 nje, idlala indima ephambili ekuveliseni amandla kwi-mitochondria, inxalenye yeseli ejongene nokuveliswa kwamandla ngendlela ye-ATP.ICoenzyme Q10, kwezinye iimeko ekubhekiselwa kuyo nje ngokuba yiCoQ10, yenziwa ngaphakathi emizimbeni yethu, yaziwa ngokuba ifumaneka kwinyama, ngakumbi entliziyweni, efana nehagu, inkukhu kunye nenyama yenkomo, kunye namafutha amaninzi.
Amanqanaba e-CoQ10 emzimbeni wakho ayancipha njengoko uneminyaka yobudala.Amanqanaba e-CoQ10 afunyenwe ephantsi kubantu abaneemeko ezithile, ezifana nesifo senhliziyo, kunye nalabo bathatha iziyobisi ezinciphisa i-cholesterol ebizwa ngokuba yi-statins.
I-CoQ10 ifumaneka kwinyama, intlanzi kunye namantongomane.Isixa se-CoQ10 esifunyenwe kule mithombo yokutya, nangona kunjalo, akwanelanga ukunyusa kakhulu amanqanaba e-CoQ10 emzimbeni wakho.
I-CoQ10 izongezo zokutya ziyafumaneka njengee-capsules, iipilisi ezihlafunwayo, iisyrups ezingamanzi, iiwafers kunye ne-IV.I-CoQ10 inokunceda ukukhusela okanye ukunyanga iimeko ezithile zentliziyo, kunye nentloko ye-migraine.
Uphando oluninzi luyaqhuba olubonisa ukuba umdla kwisithako awuxengaxengi.Ibonisa izifundo ze-12 ngoku ziqhuba uphando ngemiphumo ye-CoQ10 enxulumene nemiba equka i-ALS, i-Mitochondrial Disease, i-Preeclampsia kunye nabanye.I-CoQ10, ngelixa ingasagqunywanga kwimfihlo yababoneleli, ihlala isisithako esiguqukayo esinekamva elithembisayo.
● Iimeko zentliziyo.I-CoQ10 ibonakaliswe ukuphucula iimpawu ze-congestive heart failure.Nangona iziphumo zixutywe, i-CoQ10 inokunceda ukunciphisa uxinzelelo lwegazi.Olunye uphando lukwacebisa ukuba xa idityaniswe nezinye izondlo, i-CoQ10 inokunceda ukuchacha kubantu abaye badlula kunye noqhaqho lwevalvu yentliziyo.
● Isifo seswekile.Nangona uphando oluninzi lufunekayo, uphando oluthile lubonisa ukuba i-CoQ10 inokunceda ukunciphisa i-low-density lipoprotein (LDL) i-cholesterol kunye namazinga e-cholesterol ewonke kubantu abanesifo sikashukela, ukunciphisa umngcipheko wesifo senhliziyo.
● Isifo sikaParkinson.Uphando lwakutsha nje lucebisa ukuba needosi eziphezulu ze-CoQ10 azibonakali ziphucula iimpawu kubantu abanesifo sikaParkinson.
● I-myopathy ye-Statin.Olunye uphando lucebisa ukuba i-CoQ10 inokunceda ukunciphisa ubuthathaka bemisipha kunye neentlungu ngamanye amaxesha ezinxulumene nokuthatha i-statins.
● IMigraines.Olunye uphando lubonisa ukuba i-CoQ10 inokunciphisa ukuphindaphinda kwezi ntloko.
● Ukusebenza ngokomzimba.Kuba i-CoQ10 ibandakanyeka kwimveliso yamandla, kukholelwa ukuba esi songezo sinokuphucula ukusebenza kwakho komzimba.Nangona kunjalo, uphando kulo mmandla luvelise iziphumo ezixubeneyo.
I-1.Uzinzo olugqwesileyo-Ubuchwephesha obuphindwe kabini be-micro-coating busetyenziswe ekuveliseni i-CoQ10 Beadlet.
2. IiGranules ezihamba ngokukhululekileyo zokuxuba lula zilungele ukufunxa emzimbeni.
Ngaphakathi: Iibhegi ze-aseptic ezicociweyo / iingxowa ze-aluminiyam, i-25kgs okanye i-20KGS / ibhokisi
Okanye 5kg/Alu toti.Iitoni ezi-2/Ibhokisi
Ubungakanani bepakethi bunokunikezelwa njengeemfuno zabathengi
Isetyenziselwa umbala kunye nokuqiniswa kokutya, isiselo, iimveliso zempilo njl.
Ngaphambili: SP-VT005 High Purity Vitamin H -D-Biotin Pure Powder CAS No. 58-85-5 ngexabiso elikhuphisanayo
Okulandelayo: I-SP-H001-Eshushu iThengisa iNkozo yeMdiliya enyulu ngeProanthocyanidin (GSE) 95% yeAnti-Aging and Anti-Wrinkle
I-SP-H003-ISicatshulwa sembotyi yeKofu yeNdalo eluhlaza njengeSl...
I-Cure Natural Marigold Extract 5% -70% Zeaxanthin...
I-SP-H004 Ubisi lweNdalo oluLungileyo lwe-Thistle Isicatshulwa kunye ...
ICurcumin Astaxanthin Beadlet Astaxanthin Powder Amacwecwe eCurcumin Piperine ICurcumin yeTurmeric ICurcumin Piperine Capsules